के तपाइँमा ढाड दुख्ने समस्याकाे छ अचुक औषधीकाे काम गर्छ कपुरले, यसरी प्रयोग गर्नुहोस्! - Man Xune Kura
के तपाइँमा ढाड दुख्ने समस्याकाे छ अचुक औषधीकाे काम गर्छ कपुरले, यसरी प्रयोग गर्नुहोस्!
के तपाईंको शरीरमा पनि निलो दाग र धब्बा देखिन्छ भने सा,वधान, भइहाल्नुहोस् । किनकि शरीरमा आउने कुनै पनि परिवर्तनले तपाईंको नराम्रो स्वास्थ्य अवस्थालाई संकेत गरिरहेको हुन्छ ।
चिकित्सकहरु शरीरमा यस्तो निलो दाग 8 ओटा कारणले देखिन सक्ने बताउँछन् । ति7कारण निम्नानुसार छन्,
छालामा चोट आम रुपमा छालामा चोट लाग्दा यस्तो दागहरु देखिन्छ । कहिलेकाँही तपाईंको आफ्नै शरीरको भागले पनि अर्को भाग थिच्चिने अवस्था हुन्छ । यस्तै कुनै बस्तुसँग ठक्कर खाँदा पनि यस्तो चोट लाग्न सक्छ ।
जस्ले तेस्तो हुन्छ।।यसरी चोट लाग्दा शरीरका रक्त धमनिमा असर पुग्न जान्छ, जसका कारण शरीरमा निलो दाग देखिन्छ।खानामा पोषण तत्वको कमिको कारणरगत जम्न र रगतका धमिनिमा लाग्ने चोटहरु भर्नका लागि हाम्रो शरीरलाई केही भिटामिन र मिनरलको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
यसकारण तपाईंले खानामा यस्तो भिटामिन र मिनरल प्राप्त हुने चिजहरु समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।जस्तै भिटामिन ‘के’ले रगत जम्न मद्दत गर्छ भने भिटामिन ‘सी’ले त्वचा र रक्त धमनिमा चोट लाग्नबाट बचाउँछ । यस्तै जिंक र आइरनजस्ता मिनरलले चोटलाई छिट्टै निको पार्न मद्दत गर्छन्।
क्यान्सर र किमोथेरापीका कारणतपाईं क्यान्सरपीडित हो र नियमित किमोथेरापी गर्नुहुन्छ भने पनि शरीरमा निलो दाग देखिन्छ । यस्तो यसकारण हुन्छ कि किमोथेरापी गर्दा ब्लड प्लेट्सहरु धेरै तल आउने गर्छन् । ब्लड प्लेट्सहरु तल आउँदा शरीरमा निलो दाग देखिने गर्छ ।औषधी सेवनका कारणकेही औषधि र सप्लिमेन्ट्स प्रयोग गर्दा पनि शरीरमा निलो दाग देखिन सक्छ ।
The post के तपाइँमा ढाड दुख्ने समस्याकाे छ अचुक औषधीकाे काम गर्छ कपुरले, यसरी प्रयोग गर्नुहोस्! appeared first on Crush Angle.
Previous: “पति विक्की कौशलसँग नयाँ घरमा सरिन् कट्रिना कैफ, शेयर गरिन् यस्तो तस्विर “ हेर्नुहोस
Next: ‘ए’ डिभिजन लिगः शुक्रबारबाट नवाैँ चरणका खेल